အသည်းကွဲနေသော ကောင်မလေးတွေ ဖတ်ရန် | PoemsCorner
ဘုရားသခင်သည် လူသားမိန်းမအား ဖန်ဆင်းနေစဉ်အတွင်း ၆ ရက်မြောက်နေ့ တွင် နတ်သမီးတစ်ပါးရောက်လာပြီး ဘုရားသခင်အား ……..
“ဒီတစ်ခုလေးကို ဘာကြောင့် အချိန်အများကြီး ယူပြီး ဖန်ဆင်းနေရတာလဲ”
“ဖန်တီးနေတဲ့လူသားမိန်းမရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတွေ့ လား”
ဘုရားသခင်သည် သူဖန်တီးပြီးဖြစ်သော လူသားမိန်းမ ၏ လက်နှစ်ချောင်း အားညွှန်ပြလိုက်ပြီး….
“ဒီလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ သူမဟာ အ၀တ်လျှော်နိုင်အောင် လုပ်ထားတယ် ။ အိမ်ကပစ္စည်း ၂၀၀ လောက်ကိုလည်း ဟိုရွှေ့ ဒီရွေ့ လုပ်နိုင်တယ် ။ အစားအသောက်မျိူးစုံကိုလည်း ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ် ။ ဒါ့အပြင် ကလေးငယ်တွေကို တစ်ကြိမ်တည်းမှာ ချီမပြုစုနိုင်တယ် ။ နောက်ပြီး ဒူးနာနေတာကနေစပြီး အသည်းကွဲနေတာအထိ သူမက ပျောက်ကင်းအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ် “
ဘုရားသခင်၏စကားကြောင့် နတ်သမီးမှာ လူသားမိန်းမကို အထင်ကြီးလေးစားသွား၏ ။
“လက်နှစ်ဖက်ထဲနဲ့ အဲ့ဒါတွေ အကုန်လုံးလုပ်လို့ ရတယ် …… မဖြစ်နိုင်တာ .”
ထို့ နောက် ဘုရားသခင်အားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး …
“ဒါဟာလူသားမိန်းမ ဖြစ်ပေါ်ရမဲ့ ပုံစံ အပြည့်အစုံပဲလား”
“ဒီနေ့ တော့ သူမကို ဖန်တီးရတာတွေအရမ်းများနေပြီ ..မနက်ဖြန်ကို တစ်ချက်ကြည့်ပါဦး ၊ အဲ့ဒီအခါကျရင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူသားမိန်းမပုံစံကိုတွေ့ ရလိမ့်မယ်”
“ဒီနေ့ မှာတော့ လူသားမိန်းမရဲ့ ပုံစံဟာ ပြီးသင့်သလောက်တော့ပြီးနေပါပြီ ။ ဖန်ဆင်းခဲ့သမျှထဲမှာ လူသားမိန်းမကို ဖန်ဆင်းရတာ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးပါပဲ “
“နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါတွေဆိုရင် သူမဟာ သူမဘာသာ သူမ ပြုစုစောင့်ရှောက်တတ်တယ် ။ ပြီးတော့ တစ်နေ့ မှာ ၁၈ နာရီလောက် အလုပ်လုပ်နိုင်တယ် ။
“ဟုတ်တယ် နူးညံ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ဓာတ် သန်မာအောင်တော့ ဖန်တီးထားတယ် ။ အခက်အခဲတွေ ၊ အတားအဆီးတွေကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင်အောင် ဖန်တီးထားတယ်”
“တွေးတတ်ယုံတင်မကပါဘူး ။ ကျိူးကြောင်းဆီလျော်အောင်စဉ်းစားနိုင်ပြီး ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလည်း လုပ်တတ်သေးတယ်”
“ဟင်..ဒီမှာ အရေတွေ စိမ့်ကျနေပါလား ။ ဖန်ဆင်းထားတာတွေများလွန်းလို့ သူမမှာ ၀န်တုတ်ဝန်ပိုး ဖြစ်နေပြီလား မသိဘူး”
“ဒါဟာ အရည်တွေစိမ့်ကျတာမဟုတ်ပါဘူး ။ အဲ့ဒါကို မျက်ရည်လို့ ခေါ်ပါတယ်”
“သူမရဲ့ ဘ၀မှာ ၀မ်းနည်းမှုတွေ ၊ ကြေကွဲမှုတွေ ၊ အမုန်းတရားတွေ ၊ ချစ်ခြင်းတွေ ၊ အထီးကျန်ဆန်မှုတွေ ၊ ပြီးတော့ နာကျင်မှုတွေ ၊ ဂုဏ်ယူမှုတွေ စတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဖော်ပြဖို့ အတွက်ပါ”
“သင်ဟာ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လှပေတယ် ။ အရာရာ အားလုံးကိုလည်း စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်တွေးတောနိုင်ပေတယ် ။ သင်အခု ဖန်တီးထားသော လူသားမိန်းမကလည်း ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက် ထူးခြားပြီး အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်”
“ဟုတ်တယ် … လူသားမိန်းမက ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက် တကယ်လိုအပ်တယ် ။ သူမမှာ လူသားယောင်္ကျားတွေ အံ့သြသွားလောက်စေမယ့် ခွန်အားတွေ ရှိတယ် ။ မိသားစုရဲ့ ဒုက္ခတွေနဲ့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေကိုလည်း ဖြေရှင်းနိုင်သေးတယ်”
“သူမကြောင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ၊ ချစ်ခြင်းတွေ ၊ အတွေးအခေါ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ် ။ ကြောက်ရွံ့ မှုတွေတွေ့ ကြုံခံစားနေရတောင်တာမှ သူမက ပြုံးပြနိုင်တယ်”
“ဒါ့အပြင် ငိုကြွေးရမယ့် ဒုက္ခတွေကြုံလာချိန်မှာလည်း သူမက သီချင်းဆိုတယ် ။ ပျော်ရွှင်ရယ်မောတဲ့ အချိန်မှာလည်း သီချင်းဆိုတယ် ။ ကြောက်ရွ့ံတဲ့ အချိန်မှာလည်း သီချင်းဆိုတယ် “
“သူ့ မိသားစုအတွက် ယုံကြည်ရာကို ပြုလုပ်တယ် ။ သူမဟာ သူ့ မိသားစုအတွက် အခရာလို့ ခံယူထားတတ်ပြီး မိသားစု အောင်မြင်ခြင်းဟာလည်း သူ့ အပေါ်မှာတည်မှီနေတယ်လို့ယူဆထားတတ်တဲ့ လူသားတစ်မျိူးပါ ။ သူမရဲ့ နှလုံးသား ဟာ ပုံသဏ္ဍာန်အမှန်မရှိပါဘူး”
“သူမရဲ့ သားသမီးတွေ အောင်မြင်နေတာကြည့်ပြီး ငိုကြွေးရင်လည်း ငိုကြွေးနေတတ်သေးတယ် ။ နောက်ပြီး သားသမီးရတဲ့ အကြောင်းတို့ ကြားရရင်လည်း တစ်စုံတစ်ဦးအတွက် ဂုဏ်ယူနေတတ်သေးတယ်”
“သူမရဲ့ နှလုံးသားဟာ ဆွေမျိူးမိသားစုထဲက တစ်ယောက်ယောက် ၊ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆုံးတယ်လို့ သတင်းကြားရရင်ပဲ ကွဲကြေတတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ …. သူမဟာ ထိုကြေကွဲမှုတွေကို ဘ၀ရဲ့ ခွန်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုတတ်သေးတယ်”
“အနမ်းရယ် ၊ယုယတဲ့ ထွေးပွေ့ မှုဟာ အသည်းကွဲခြင်းကို သက်သာစေနိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုလည်း သူမကသိသေးတယ်”
“ဒါပေမဲ့ သူမမှာ ချိူ့ ယွင်းချက်တစ်ခုတော့ ရှိတယ်”
“ချိူ့ ယွင်းချက်တစ်ခုတော့ ရှိတယ်လို့ ပြောတာပါ”
“သူမဟာ သူမရဲ့ အဲ့ဒီလို တန်ဖိုးရှိမှုတွေကို မေ့နေတတ်တယ်”
“နောက်ပြီး သူမဟာ ကမ္ဘာလောကအတွက် အဖိုးတန် လူသားတစ်ယောက်ပါလား ဆိုတာကို သူ့ ကိုသူ အမြဲတမ်းလည်း မေ့နေတတ်တယ်”
ဒီပုံပြင်လေးက ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ် ။ တစ်ချိူ့ မိန်းကလေးတွေ တွေ့ နေရပါတယ် ။ အသည်းကွဲလို့ စိတ်ညစ်ပြီး.. စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်းတွေ လျှောက်လုပ်လို့ ဘ၀ဆုံးသွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေပေ့ါ ။ ဒီပုံပြင်လေးကို ဖတ်ပြီး မိမိကိုယ်မိမိ အားတင်းပြီးအသည်းကွဲမနေပဲ လောကကြီးကို ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီးဆက်ဆံလိုက်ပါလို့ …ပြောကြားရင်း …..
ဒီပုံပြင်လေးဟာ လူနေ (နတ်သမီးအဆောင်)ဆိုတဲ့ ၀တ္ထု စာအုပ်ကလေးထဲက ဇာတ်လိုက်မင်းသားလေးကို သူ့ အဖေက ပြောပြနေတဲ့ ပုံပြင်လေးဖြစ်ပါတယ် ။
In: ဆောင်းပါး Posted By: myatnoe Date: Jun 10, 2010
လွဲနေသော ပစ်မှတ်များ – ဒီရေလှိုင်း
“ ကြည်နှုးချမ်းမြေ့ပါစေ ” ချစ်သူ ( လူဆိုး )
Leave comment 14 Comments & 1,169 views
(: (: တကယ်ကြီးလား အဲလိုဆိုတာာာာာာ (:
တော်တော်လေး သဘောကျသွားပါကြောင်း … (:
By: ဖြိုးဖြိုး at Jun 10, 2010
အရမ်းကြိုက်တယ် အရမ်းကောင်းတာပဲ ခုမှပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိတော့တယ် 😛
By: အိလေး at Jun 11, 2010
ကောင်းလိုက်တာ မြတ်နိုးရယ် ။
ရတု လဲ အမှန်တော့ ၇တု ချစ်ရသူကြောင့် အသည်းကွဲနေတာ နှစ်ပေါက်နေပြီ။
အင်း ၊ ဟုတ်မယ်။ ချို့ယွင်းချက်ရှိတယ် ဆိုတာလေ ။
မြတ်နိုးရဲ့ ပုံပြင်လေးကို မမေ့အောင် မှတ်ထားမယ်။
By: yatu at Jun 11, 2010
thank you myat noe
By: cherry at Jun 11, 2010
By: လေပြေ at Jun 11, 2010
အ၇ာ၇ာ ပြည့်စုံနေ ၇င် သဘာဝ ဘယ်ကျတော့ မှာလဲ
သူ တော်တယ်လို့ အမြဲယုံ ကြည်နေ၇င် မာနကြီးပြီး
ချစ်တတတ်တဲ့ စိတ်တွေ ပေါလာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး
ချစ်ခြင်း ကိုနားမလည်၇င်း လည်း …… …..
By: kyaw min oo at Jun 11, 2010
ကောင်းပါတယ်။ နည်းနည်းတောင်ဘ၀င်မြင့်သွားတယ် ။း)
By: hninsiwar at Jun 17, 2010
ကျေးဇူးပဲမြတ်နိုး တို့လဲအခုချိန်မှာ အသဲကွဲနေတယ်လေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားဆေးလေး တခွက်သောက်လိုက်ရသလိုပါဘဲ
By: chittee357 at Jun 21, 2010
By: poht at Jun 23, 2010
ဟဲဟဲ …. ကိုယ့်ကိုကို အထင်ကြီးသွားတယ်
By: နောင်လ်လေး at Jun 23, 2010
By: shweyiphyo at Jun 27, 2010
By: အသဲကွဲမိုး at Nov 26, 2011
ဟ..ဟ…ဟ…။ ဘယ်လိုကြီးလဲဗျ…။ ကျွန်တော်လဲ ဖတ်ချင်တာပေါ့ဗျာ…။ ကဗျာဆိုက်ပေါ်မှာလာတင်ပြီးတော့ မဖဖတ်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်ိတော့ အဆင်မပြေလောက်ဘူးဗျ…။ မ အဟွာရဲ့..၊ အဲ နာမည်လေးလဲလှသကိုး..၊
နောက်ဆိုရင် အားလုံးဖတ်ခွင့်ရတဲ့ ဆောင်းပါးမျိုး… ကဗျာမျိုး များများရေးနိုင်ပါစေဗျာ….။
By: ကျက်သရေတုံး at Nov 26, 2011
By: ei lay at Nov 26, 2011